Torohevitra Mahasambatra ny Fianakaviana: Ampio Izy Hanana Toetra Tsara
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Bengali Bichlamar Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Danoà Douala Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Galoà Goujrati Goun Grika Groenlandey Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Letonianina Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Mbunda Mongol Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Télougou Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Hoatran’ny hoe manoro ny zanakao an’izay lalana tokony hizorany ianao, rehefa manampy azy hanana toetra tsara
Azo antoka hoe misy zavatra heverinao hoe mety na tsy mety, ary tianao hahay hanavaka an’izany koa ny zanakao. Ampianao, ohatra, izy mba hanao ny marina.
Tsara koa ny ankizy raha ampianarina hazoto hiasa, tsy hanavakavaka, ary hiahy na hihevitra ny hafa. Tokony hozarina hanao an’izany izy ireo, dieny mbola kely.
TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin’izany.”—Ohabolana 22:6.
Mandroso be izao ny teknolojia, ka tena mila mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ny ankizy. Hoy i Karyn: ‘Mora mahita zava-dratsy ny ankizy rehefa mampiasa finday na tablette. Mety hahatonga ny zanatsika hanao ratsy izany. Mety tsy ho haintsika akory hoe mijery sary vetaveta ry zareo, nefa mipetraka eo akaikintsika eo!’
TORO LALAN’NY BAIBOLY: ‘Manana fahaiza-misaina efa nozarina hanavaka ny tsara sy ny ratsy ny olona matotra.’—Hebreo 5:14.
Mila miahy ny hafa koa izy ireo. Tafiditra amin’izany ny hoe mahalala fomba, ka miteny hoe “azafady” na “misaotra.” Tsy dia miraharaha ny hafa intsony mantsy ny olona amin’izao. Ny fitaovana elektronika no hoatran’ny sarobidy kokoa aminy.
TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Izay tianareo hataon’ny olona aminareo no ataovy aminy koa.”—Lioka 6:31.
Hazavao tsara aminy ny atao hoe mety sy tsy mety. Hitan’ny mpikaroka, ohatra, fa tsy ho mora voatarika hanao firaisana ny tanora, raha efa nohazavaina tsara taminy hoe natao ho an’ny olona manambady ihany izany.
SOSO-KEVITRA: Hararaoty izay zava-miseho mba hampianarana azy. Raha miresaka vonoan’olona, ohatra, ny vaovao, dia afaka miteny ianao hoe: “Mahavanon-doza mihitsy ny olona rehefa tsy mahafehy ny hatezerany. Fa maninona ny olona no lasa hoatr’izany, hozy ianao?”
“Vao mainka tsy hain’ny ankizy ny tokony hataony, raha tsy fantany akory ny atao hoe mety sy tsy mety.”—Bruno.
Ampianaro hiahy ny hafa ny zanakao. Efa azo ampianarina hiteny hoe “azafady” sy “misaotra”, na dia ny ankizikely aza. Azo ampiana koa izy ireo mba ho tsara fanahy amin’ny hafa. “Tokony ho tsapan’ny ankizy hoe tsy izy irery akory no olona, fa mbola misy olon-kafa koa manodidina azy. Ohatra hoe ny fianakaviany, ny mpiara-mianatra, ary ny mpiray tanàna aminy. Vonona kokoa hanao soa ho an’ny hafa izy raha mahatsapa an’izany.”—Ny Fitaizan-janaka any Amin’ny Tany Samihafa (anglisy).
SOSO-KEVITRA: Ampanaovy raharaha izy, amin’izay tsapany hoe tena ilaina ny manampy ny hafa.
“Tsy ho sahirana ny zanatsika rehefa mitokan-trano, raha mbola kely izy dia efa ampanaovina raharaha. Efa zatra mandray andraikitra mantsy izy.”—Mariah.
Internet: Ampitandremo ny Zanakao